समुद्रपारीबाट नया नेपालको यात्रा
एउटै यात्रा कसरी हुन्छ त दुइवटा ब्लगबाट? शिर्षक एउटै भएपछी हुदैन त एउटै यात्रा? शिर्षक मात्र कांहा हो र बिषय पनि एउटै हो। कुनै बेला एउटै बिषयमा लेख्न केही पहिला sapanasansar.com का मित्र बिश्व र मेरो सल्लाह भएको थियो। एउटै लेख धैरै ब्लगमा छाइरहेको बेलामा एउटै बिषयमा दुइवटा ब्लगमा फरक लेख देख्दा कस्तो अनुभव होला म त्यसै रोमान्चित भएको थिए। सल्लाह अनुसार हामीले पस्चिमको यात्रा तय गर्यौं । म बसेको ठाउं भन्दा करिब ६० माइल पश्चिममा St Cloud State University छ। दौरा सुरवालमा ठाटिएको म interstate 94 मा exit 171 लाइ तारो बनाइरहेको थिए। त्यहा हिजो शनिबार हुन गइरहेको थियो नेपाल सांझ, जसको शिर्षक थियो "यात्रा"।
करिब एक हजार मानिसले खचाखच मनोरन्जन हलमा नेपाली बिध्धार्थीहरुले नेपाली संस्क्रिती झल्काउदै उपस्थित दर्शकलाइ भरपुर मनोरन्जन दिइरहेका थिए। नेपालको भुभागमा मात्रै बिभिदता छैनकी भाषा र संस्क्रितीमा पनि उत्तीकै बिभिदता छ। अमेरीकाको अर्कनसास स्टेट जत्रो क्षेत्रफल भएको देशमा ६० भन्दा ज्यादा जात जाती हरु छन त ७० भन्दा धेरै बोलीचालीका भाषाहरु छन। २ घन्टाको समयमा यि सबै देखाउनु निकै चुनौतीको काम थियो। अमेरीकाको कठीन जिबन, पढाइ र कामबाट बचेको समय खर्चेर नेपाली बिध्धार्थी अमेरीकी माझ नेपालको संस्क्रिती देखाउन उपस्थीत भएका थिए। समग्रमा प्राय बिदेशमा हुने नेपाल सांझमा केही रुपमा बिषय बस्तुमा एकरुपता हुने गर्छ। एकरुपताले दर्शकहरुलाइ दिक्क बनाउंछ त्यसैले "यात्रा"मा एकरुपतलाइ चिर्दै बिभिधदता थपिएको थयो, जसले गर्दा समय गएको पत्तो नै भएन। पंचकन्याको स्वागत,कुमारीको न्रित्य,नेपाली राष्ट्रिय गान प्रस्तुत गरेर हाम्रो दैनिक संस्कार पस्केका थिए। शुरुमा साना तिना भाषणले लाटो बनेका दर्शकलाइ नया नेपाल र पुरानो नेपालको बारेमा भिडियो देखाएर कार्यक्रमको क्षितज कोरिएको थियो। इतिहास भएर हो या स्पष्ट नै भएर हो पुरानो नेपालको द्रष्य राम्रै बुझियो। नया नेपाल कुहिरोमै रुमलिएर हो या प्रस्तूती नै त्यस्तै नया नेपालको प्रस्तुती त्यती स्पष्ट भएको लागेन। मन तब त्यसै रसायो जब साना साना अमेरीकी नानीहरु मै छोरी सुन्दरी भन्दै नेपाली गितमा नाचे। त्यसको भिडियो मैले प्रस्तुत गरेको छु ,अमेरीकी किशोरीहरु नेपाली तालमा पाइला मिलाएको देखेर पक्कै पनि तपाइहरु दंग पर्नुहुनेछ । तारा देबीको "काली पारी " को गितले चोखो अमुर्त प्रेममा नेपालीमन कसरी कल्पिन्छ छर्लागांइएको थियो। नेपथ्यको तालको पानी बोलको लोक-पप गित देखी लिएर रेश्मा सुनुबारको मै ठुली भइछु रे गितबाट नेपालीहरूको प्रेमजाल देखी दैनीक जिबनशैली झल्काउने प्रयास गरिएको थियो। साथै रिमिक्स गित, कबिता र चुट्किलाबाट नेपाल नै देखाउने प्रयास गरिएको थियो।
जब मन फुरूगं भयो तब नेपाली भेष भुषा मा बिध्धार्थीहरु मञ्चमा प्रस्तुत भए। नेपाल चार जात छत्तिस बर्णको फूलबारी भएको प्रत्यक्ष बर्णन पाएको महशुस भयो। जात नै फरक भएको भरमा नेपाललाइ मधेस देखी हिमाल सम्म टुक्राउनु पर्छ भने जमातलाइ सात समुन्द्र पारी पढ्न आएका नेपाली बिध्धार्थीहरुले हामीहरु फुटेर होइन जुटेर नै नया नेपालको यात्रा तय गर्ने सकिन्छ भनेर महत्वपूर्ण पाठ पढाइरहेका थिए।
Posted by: nepalean Labels: समसामयिक, समाचार/ टिपोट
उत्कृष्ट प्रस्तुती !
कार्यक्रम रमाईलो थियो। ब्यबश्थापक भाइबहिनीहरुले राम्रो मिहेनत गरेका रहेछन्। नेपाल र नेपालीलाई चिनाउने उहाँहरुले गरेको प्रयास सह्रानियछ। नेपालीएनजी जानु भएको रहेछ, कसरी मेरो भेट चाँहि भएन?
नेपालीहरु कतिपयले यि नानी हरु जती हलिन पनि जान्दैनन यो त गजब रछ झन । के बुझयका होलन र खै गीत तै पनि ताल मिलायका नै छन जेहोस धन्यबाद क्लिप अप्लोड को लागि नेपलियन जि ।
ummm... aruta thikai ho yauti nani thuli parichan basna uthana nai garo bhayacha bicharalai bhujnu parcha ni uni ko marka any way nice one clip...
nepaliyan sir dherai ramro kurama kalam chalaunu bhayacha yastai saskrit ko jagerna ko lagi harthau bata lagnu parcha taba matra kunai kura tesai harayara jana paudaina...dherai khushi video hererai bhaya pani
समुद्रपारीबाट नया नेपालको यात्रा धेरै नै रोचकको यात्रा रहेछ।
ma nepali said...
wow....Amazing ! American kids dancing on Nepali songs. great Thumbs Up !
"समुद्रपारीबाट नया नेपालको यात्रा"
sahit ko picture & video aafai boli rahecha good job ....
good good nice one thumbs up !!!
संपुर्ण मित्रहरुले पढेर मन पराइदिनु भएको मा धेरै धन्यबाद। देश बिदेशबाट यसरी नै नेपालको संस्क्रिती जोगिदै जाओस। नेपाली हुनुमा यही नै गर्भ हो।
हुन पनि भाषा नै नबुझी तालमा नाच मिलाउनु निकै गार्हो कुरा हो, नानीहरुको नाच निकै प्रशसिय छ।